Uhlolojikelele Lwezinsiza / Izinsiza | I-Ota Citizen's Plaza
Igumbi lokuqeqesha, ithenisi yezimoto, ithenisi yetafula>
Ungajuluka kalula ukuqeda ukuntuleka kokuvivinya umzimba nokuma komzimba.
Okwe-auto tennis kanye netafula tennis, indawo yokuvivinya umzimba izokwehlukaniswa kabili ngosuku olumisiwe lwesonto, futhi kuzofakwa umshini we-auto tennis kanye netafula letafula letafula ukuze ukwazi ukuzijwayeza ithenisi nethebula lethenisi.
Njalo ngoLwesithathu, ngoba yindawo yokugomela ukutheleleka okusha kwe-coronavirus, kuze kuphele ibhizinisi lokugomaIthenisi ezenzakalelayo / ithenisi yetafulaAkutholakali. (Itholakala njalo ngoMsombuluko nangoLwesihlanu.) Sicela uhlole okulandelayo isikhathi sokusetshenziswa kwalesi sikhungo ukuvimbela ukusabalala kwesifo esisha se-coronavirus.
Cishe ngamamitha-skwele ayi-105.9
Ithenisi ezenzakalelayo: Umuntu ongu-1 ngomshini ngamunye (ayikwazi ukushintshwa phakathi)
Ithenisi letafula ・ ・ ・ Kuze kufike kubantu abangu-1 ngeyunithi ngayinye
Ukuvivinya umzimba nge-aerobic / ukukhuthazela kwe-cardiopulmonary
Umshini wokunyathelisa: Labode LXE
Umshini wokugijima: Labode LXS
Ukuhamba ngebhayisikili: Ibhayisikili elingenantambo V67Ri
Qeqesha sonke isifuba sakho: I-FUNASIS Chest Press
Qeqesha ingaphambili lesifuba: FUNASIS fly
Qeqesha amahlombe akho: FUNASIS lat don-down
Qeqesha izingalo zombili (ikakhulukazi umzimba ongaphezulu): I-FUNASIS multi-pulley
Qeqesha umhlane wakho: Isandiso se-FUNASIS emuva
Qeqesha isisu sakho: FUNASIS Crunch
Qeqesha izinhlangothi zakho: FUNASIS Rotary Toso & Twist
Qeqesha umzimba wakho ophansi: I-FUNASIS Leg Press & Inkonyane Phakamisa
Qeqesha uhlangothi lwangaphambili lomlenze: Ukunwetshwa komlenze we-FUNASIS
Qeqesha ingemuva lemilenze yakho: UFUNASIS ohlezi umlenze uhleli
Qeqesha ngaphakathi nangaphandle kwamathanga akho: Ukwengezwa kwe-FUNASIS & Ukuthunjwa
Amahlombe nangemuva: Isixhumanisi Sokulungisa Umzimba II
Umzimba ophezulu: Isixhumanisi sokulungisa umzimba II
Imali yokusetshenziswa kwezinsiza nemali yokusebenzisa izinsizakusebenza ◆ Sicela uthethelele ukushintshaniswa.
Kanye (akunamkhawulo wesikhathi) 330
Imizuzu engama-1 isikhathi ngasinye 330
1 isikhathi ngemoto ngehora 330
Kusukela ngo-9: 00 kuya ku-22: 00 nsuku zonke.
* Isicelo sokusetshenziswa kuze kube ngu-21: 00
* Ukusetshenziswa komshini kuze kube ngu-21: 45
Ithenisi ezenzakalelayo (amayunithi ama-3)
UMsombuluko水 曜 日(Isigaba 1 kuye ku-6)
ULwesihlanu (Isigaba 1-22)
* Njalo ngoLwesithathu, indawo iyagonyelwa ukutheleleka okusha kwe-coronavirus, ngakho-ke ngeke isetshenziswe kuze kuphele ibhizinisi lokugoma.
Ithebula lebhola (amayunithi ama-5)
UMsombuluko水 曜 日(Isigaba 1 kuye ku-3)
ULwesihlanu (Isigaba 1-11)
Isikhathi se-tennis se-Auto
Isikhathi setafula lethenisi
Sicela uthenge ithikithi kumshini wokuthengisa amathikithi ngosuku lokusetshenziswa bese usebenza ngqo.
Sizoqala ukwamukela i-auto tennis kanye ne-table tennis imizuzu engama-30 ngaphambi kwesigaba ngasinye (imizuzu eyi-1 ngaphambi kwesigaba sokuqala kuphela), futhi sizokwamukela isigaba esilandelayo ngokushesha nje lapho sigcwele.
Amakamelo okuqeqesha ayatholakala nganoma yisiphi isikhathi.
Amakamelo okushintsha (izindawo zokugeza, okhiye, amarokhethi ezicathulo) ayatholakala.Sicela uyisebenzise nesikhathi esiningi.
Lapho usebenzisa igumbi lokuqeqesha noma ithenisi yetafula, sicela ulethe izicathulo zasendlini zezemidlalo.
Uma usebenzisa i-auto tennis, sicela ulethe irakhethi yethenisi nezicathulo zethenisi (ukuze uzisebenzise endlini).
Kukhona "igumbi lokuqeqesha, i-auto tennis, isigqebhezana setafula lethenisi".
Abasebenzi bazochaza ukuthi isetshenziswa kanjani le mishini.
Abafundi besikole samabanga aphansi nabancane abakwazi ukuyisebenzisa, kepha i-auto tennis kanye netafula ithenisi kungasetshenziswa kuphela ebangeni lesi-5 nelesi-6 lesikole samabanga aphansi uma kuhambisana nomqaphi.
Amathikithi okupaka awakwazi ukukhishwa.